हाम्राे अनुहारमा बारम्बार एकै ठाँउमा किन आउँछ डण्डीफोर ? - ज्ञानविज्ञान
गालामा डण्डीफोर आउँदा कम्ती बोर हुँदैन । एक त अनुहारको शौन्दर्य बिग्रने, अर्को मनमा चिन्ता परीरहने ।
के तपाई पनि डण्डीफोरका कारण चिन्तामा हुनुहुन्छ ? के तपाईको अनुहारमा हप्तैपिच्छे डण्डीफोर आउँछ, त्यो पनि बारम्बार एकै ठाउँमा ? यदी त्यस्तो हुन्छ भने बुझ्नुहोस्, तपाईको अनुहार संवेदनशील छ । अनि अनुहारको सफाई पनि राम्ररी भएको छैन ।
डण्डीफोर प्रायः छाला चिल्लो भएमा आउने गर्छ । खानामा चिल्लोको मात्रा घटाउने हो भने डण्डीफोरको समस्याबाट केही हदसम्म मुक्ती पाउन सकिन्छ ।
हर्मोनको गडबडी, छालाको छिद्रमा टाँसिएको धुलोमाटो तथा व्याक्टेरियाका कारण बारम्बार एकै ठाउँमा डण्डीफोर आउने गर्छ । डण्डीफोर आउनुका अन्य कारण यस्ता छन्
गर्भावस्थामा हुने हर्मोन असन्तुलनका कारण बारम्बार एकै ठाउँमा डण्डीफोर आउने गर्छ । गर्भावस्थामा यो सामान्य हो ।
चलाइरहने र निचोर्ने बानी
कयौ मानिसको बानी हुन्छ, डण्डीफोरमा हात लगाइरहने । बारम्बार एकै ठाँउमा डण्डीफोर आउनुको कारण यो पनि हो । बारम्बार हातले डण्डीफोर चलाइरहने बानीका कारण अनुहारको छिद्रमा तेल तथा फोहर जम्मा हुन्छ । छिद्र टालीएपछि डण्डीफोर निस्कन्छ ।
कसैको बानी चाहिँ डण्डीफोर आयो कि निचोर्ने हुन्छ । निचोर्दा डण्डीफोर त निस्कदैन, तर त्यसले झन समस्या ल्याउँछ । बारम्बार डण्डीफोर थिच्दा, निर्चोदा या कोटयाउँदा त्यो ठाउँ सुन्नीन्छ र डण्डीफोर झन ठूलो देखिन्छ ।
यस्तो बेला छालाको छिद्र्रलाई मनतातो पानीले सफा गर्नुपर्छ । विभिन्न टि्रटमेन्ट क्रिम दलेर छालामा जम्मा भएका फोहर तथा अतिरिक्त तेल हटाउन सकिन्छ, जसबाट अनुहार सफा हुन्छ ।
हामी जब चिन्तीत हुन्छौं, तब मुहारमा पनि त्यसको असर पर्छ । हामी हाँस्दा मुहार तन्कीन्छ भने रिसाउँदा या तनावम हुँदा खुम्चीन्छ । किनकी, मानिसको मुहारमा ‘स्टे्रस एरिया’ हुन्छ । र, डण्डीफोर पनि बारम्बार स्ट्रेस एरियामै आउँछ ।
तनाव या कुनै विरामीका कारण मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी हुँदा त्यो ठाउँमा डण्डीफोर आउँछ । हर्मोनको गडबडी तथा महिनावारी हुँदा पनि महिलालाई त्यस्ता ठाउँमा डण्डीफोर आउने गर्छ ।
छालाका अन्य धरै समस्या हुन्छन्, जसका कारण अनुहारमा बारम्बार डण्डीफोर आउँछ, त्यो पनि एकै ठाउँमा । छालाभित्र नदेखिने डण्डीफोर पनि हुन्छन् । छाला भित्र डण्डीफोर आएमा त्यसको केही भागमात्र छाला बाहिर देखिने गर्छ । बाँकी भाग भित्रै रहन्छ । विशेषगरी छालाका छिद्र विभिन्न भागमा विभाजित हुन जाँदा त्यसमा रहेको तेल कोणको आकारमा माथि उठ्ने गर्छ ।
डण्डीफोर आउने कारण र हटाउने केहि घरेलु उपाय
डण्डीफोर प्रायजसो युवावस्थामा नै आउँछ । डण्डीफोरले अनुहारको सुन्दरतानै समाप्त गर्दिन्छ । डण्डीफोर बढी तेलीय छालामा, कब्जियतका कारणले, चाँयाको कारणले वा तनावको कारणले हुने गर्छ ।
डण्डीफोर आउने कारण
१.युवावस्थामा हार्मोनको बृद्धि
४.छाला फोहोर हुनु
५.विभिन्न प्रकारका क्रिम मलमको प्रयोग
६.भिटामिन ‘ए’को कमी
७.चिल्लो पदार्थको बढी सेवन
८.सम्भोगको अति चाहना
१२.पेय पदार्थको असर
यदि तपाई पनि डण्डीफोरको कारणले हैरान हुनुहुन्छ भने बजारमा पाइने कुनै क्रिम लगाउनुको साटो केही घरेलु उपायहरु अपनाउन सक्नु हुन्छ । डण्डीफोर हटाउनका लागि यी घरेलु उपाय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
डण्डीफोर हटाउने केहि घरेलु उपाय, यस्ता छन्
एउटा माटोको भाँडोमा मह र घिउकुमारी मिसाउनुस् । त्यसमा केही निमको पात क्रस गरेर राख्नुस् र त्यसलाई एक दिनभरका लागि चिसो स्थानमा राख्नुस् ।
अर्को दिन त्यसमा गुलाब जल मिसाएर डण्डीफोरमा लगाउनुस् र सुकेपछि धुनुस् । यो प्रक्रिया दिनहुँ गरेपछि डण्डीफोरको दाग मेटिनेछ ।
आलुको टुक्रा काट्नुस् र अनुहारमा बिस्तारै रगडेर लगाउनुस् । एउटा टुक्रा सुक्यो भने अर्को लगाउनुस् । यो क्रमलाई १५ मिनेटसम्म निरन्तरता दिएपछि अनहारलाई सुक्न दिनुस् ।
त्यसपछि धोएर मोस्चराइजर लगाउनुस् । यो प्रयोग हप्तामा ३–४ पटक गर्नुहोस् ।
फेसवासमा एक चिम्टी खाने सोडा मिसाएर लगाउनुस् र चिसो पानीले अनुहार धुनुस् । यसबाट छालामा थोरै झनझनाहट हुन्छ । छालाका क्लिनिकमा छालामा चमक ल्याउन यो उपाय अपनाइन्छ ।
तर यसलाई अनुहारमा २० सेकेण्डभन्दा बढी नराख्नुस् ।
हामीले सम्बन्धित थप केहि जानकारी दिइएका छाै
Don't Miss it महिलामा हुने डिम्बासयको क्यान्सर के हो ? यस्ता महिलालाई बढी पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ – यसबाट कसरी बच्ने ?
Up Next नुहाउनु अघि कपालमा किन तेल लगाउनुपर्छ ? जानी राखौ कपालमा तेल लगाउँदाको फाइदा
मिलेका दाँत भएरमात्र मुख स्वास्थ्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि दाँतसँगै सास गन्हाउने समस्या हुनु हुँदैन । सास गन्हाउने समस्या छ भने एसो गर्नुहोस्
गोरो वर्ण, सुन्दर अनुहारले मात्र व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्काउँदैन । त्यसका लागि व्यक्तिको मुख स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । मिलेका दाँत भएरमात्र…
घमण्डी मान्छे र उम्लेको दुध उस्तै हो, सम्हाल्न नसके दुवैको अस्तित्व पतन हुन्छ – हेर्नु पर्ने भिडियो
भिडियो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ तर भिडियोमा पुग्नु भन्दा अगाडी त्यो भन्दा माथिको लेख पढ्न अनुरोध गर्दछौँ । घमण्डी मान्छे…